डाक्टरले हजार पटक पनि अप्रेशन गर्नुपर्छ भन्छन्, मेरो एउटा मात्र सन्तान हो यिनलाई बचाउन अब मसंग कुनै उपाय छैन (भिडियो हेर्नुस्) – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /Video/डाक्टरले हजार पटक पनि अप्रेशन गर्नुपर्छ भन्छन्, मेरो एउटा मात्र सन्तान हो यिनलाई बचाउन अब मसंग कुनै उपाय छैन (भिडियो हेर्नुस्)
अहिले उनी ७ वर्षकी भइन् । उनी राम्ररी बोलेको आफुलाई सम्झना छैन । तर आमाले उनलाई निकै राम्रो बोल्थ्यौ भनेर भनेको थाहा छ । तर अहिले घाँटीको शल्यकृया भएपछि भने आवाज पनि गुमेको छ ।
यो घटना वुटवलको जितपुर ४ नम्बरमा रहेकी यि बालिका ४ वर्षकी भएपछि अचानक उनको घाँटी दुख्छ । उनको आमाले छोरीलाई अस्पताल लिएर जान्छिन् । अहिले ३ वर्ष भइसक्यो धेरै ठाउँमा उपचार गरिन् छोरीको तर आवाज फर्किएको छैन ।
लामो समय उपचार गर्दा पनि निको नभएपछि उनले छोरीलाई काठमाडौ शिक्षण अस्पतालमा लगिन् । घाँटीमा निकै ठूलो मासु पलाएको रहेछ । त्यो शल्यकृया गरेपछि छोरी बोल्न थालिन् । तर ६ महिनामा फेरी त्यो रोग बल्झियो । यसरी पटक पटक गरेर ६ पटक शल्यकृया भइसक्यो ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
तर अहिले झन छोरीको आवाज पनि गुमेको छ । झण्डै ६ लाख भन्दा बढी खर्च भैसकेपनि निको नभएपछि उनले चिकित्सकलाई सोध्दा तपाईको छोरीलाई हजार पटक पनि शल्यकृया गर्नुपर्छ भने, छोरी १८ वर्षको उमेर हुँदा सम्म यसरी नै शल्यकृया गर्न पर्छ भन्छन्, उनले रुँदै भनिन्,, मसंग यो सानो झुपडी बाहेक केही छैन । अब म कसरी छोरीको हजार पटक शल्यकृया गर्ने ?
छोरीको उपचार त सम्भव छ तर त्यसका लागि भारत लैजानुपर्छ भनेका छन् तर पैसा भने छैन । घरमा बेच्ने कुरा पनि छैन अब कसरी उपचार गरुँ ? उनले विलौना गर्दै भनिन् ।